Akaebe - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ebe Ouzhan malitere ahia zuru ụwa ọnụ, anyị emeriwo ọtụtụ ndị ahịa:
Enwere m afọ ojuju maka ọrụ ouzhan. Ọrụ ndị ahịa na-adị ngwa ma Gaby rụrụ ọrụ dị egwu maka akụkụ m. M na-atụ anya iso Ouzhan rụ ọrụ ọzọ!
Ngwa ngwa tụgharịa na ngwaahịa dị mma emere maka ịkọwapụta. Enweghị m ike ịrịọ maka ihe karịrị nke ahụ. Ozhan bụ ezigbo onye ọlụlụ!
Ejiri akụkụ 3D mee akụkụ. N'oge mkparịta ụka nke iwu ahụ, ndị injinia lebara anya ma nyere m aka ịchọta ezighi ezi m ka m wee nwee ike ịgbazi ha. Mere elu mma. Achọpụtara mbupu ahụ. A haziri akụkụ nke ọ bụla n'ụzọ zuru oke, iche iche na ndị ọzọ na fim dị iche iche. Obi dị m ụtọ na soplaya. Onye isi njikwa Chandler na-akpọtụrụ, na-aza ajụjụ n'otu ụbọchị. Enwere m olileanya ịnọgide na-arụkọ ọrụ ọnụ.
Nke a CNC ụlọ ahịa nkume! Obi dị m ụtọ na ọrụ ahụ ma ugbu a enwere m enyi na-enyere m aka na iwu m na-eme ka ihe niile dị mfe. M na-etinye iwu ọzọ ugbu a, ọrụ ngwa ngwa na ezigbo enyi. Rịọ Rio ọ dị mma ịrụ ọrụ!
Ezigbo ọrụ na usoro niile. Ndenye nkwurịta okwu site na email na whatsapp na-ekwurịta ihe niile anyị chọrọ na nkọwa na ihe atụ nyere kpọmkwem ka anyị drawings nke a nnọọ elu mma na imecha. Anyị na-atụ anya iso Ouzhan rụọ ọrụ n'ọdịnihu nke ihe anyị kwenyere na ọ ga-abụ mmekọrịta ogologo oge gafee ọtụtụ ngwaahịa na pọtụfoliyo anyị.